कर्मचारीलाई आदेशले होइन कानुनले चलाउनुपर्छ – SidhaRekha
२०७४ श्रावण २३, सोमबार ११:१५ August 22, 2017
स्थानीय तहको चुनाव सकिएर जनप्रतिनिधिहरु धमाधम बहाल हुँदैछन । २० बर्षको अन्तरालपछि भएको चुनाव र जितेको मानसिकताका कारण झट्टै केही गरीहालौं भन्ने चाहना उनीहरुमा छ । चुनावपछि सिंहदरबार नै गाउँ गाउँमा आइपुुग्छ भनेर झयली पनि पिटाइयो । तर उनीहरुका लागि पहिलो गाँसमै ढुंगा लाग्यो स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारी नभएर । अनि बल्ल तल्ल गरेका एकाध निर्णयहरु पनि सरकारी आदेशले बदरभागी बनाइएर ।
निकै पेचिलो बनेको कर्मचारी समायोजनको मुुद्दा यतिबेला शिक्षा सेवाका कर्मचारीका कारण कार्यान्वयन हुन सकेन भनिन्छ । अहिलेको जल्दोबल्दो इस्यु आखिर के हो ? शिक्षा सेवामा लामो समयदेखि कार्यरत उप सचिव नगेन्द्रराज पौडेलसँग सीधारेखाका प्रधान सम्पादक घनश्यामसागर पन्तले गरेको कुराकानीका केही अंश:
नगेन्द्रराज पौडेल – उप सचिव, शिक्षा सेवा
 अन्तर्वार्तामा स्वागत छ ।
 अहिले चलेको समायोजन के हो ?
एउटा हौवा हो यो । स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात् स्थानीय तहमा कतिपय कार्यालयहरु जानुपर्ने थियो । स्थानीय सरकारको क्षेत्रभित्र पर्ने कार्यालयहरु एक्कासी स्थानीय तहमा विलय नभई स्वायत्त तर ती तह मातहत रही कार्य गनुपर्ने हो । यसो गर्दा शाहीलेकमा सीमित शिक्षा कार्यालय बैतडीका सबै स्थानीय तहमा जानुपर्ने कुरा हो । शाहीलेकबाट हुने शिक्षाका काम अन्य ठाउँबाट हुनुपर्ने हो र यसका लागि भौतिक व्यवस्थापन पहिलो ,जनशक्ति व्यवस्थापन त्यसपछि हुँदै जानुपर्नेमा फलानो कर्मचारी खटाइएको छ भनेर जसरी समायोजनको नाम दिइयो यो नै सरासर अमिल्दो भयो ।
 उसो भए मिल्दो के हो त ?
पहिला स्थानीय तहबाट के के सेवा दिने हो प्रष्ट हुनुपर्यो । अनि सो सेवा प्रदायक अड्डा कहाँ बस्ने, कसरी बस्ने तय हुनुपर्यो । त्यो अड्डाका लागि पुुग्दो जनशक्ति व्यवस्थापन गरिनुपर्यो । अनि बल्ल जिल्लाका अड्डालाई स्थानीयस्तरमा रुपान्तरित गर्न सकिन्छ । स्थानीय विकास सचिवलाई मन लाग्यो भन्दैमा आदेश जारी गराउँदै कर्मचारी फलानो ठाउँमा जाउ भन्न पाइदैन ।
 भनेपछि द्वन्द राम्रे चल्ने भो ?
कठै, हामी कर्मचारीले कोसँग द्वन्द गर्नु ? नियम, विधि र कानुनको कुरा उठाएको मात्र हो । कर्मचारीलाइ बाँध्ने नियम र कानुनले हो । आदेश जारी गरेर कर्मचारीको खटन पटन हुन सक्दैन । फेरि यो संकटकालको बेला पनि त होइन नि, आदेश जारी गरी काम गर्नलाई । जेष्ठता, कनिष्ठता समेतको ख्याल नगरी एउटा सेवाको कर्मचारीलाई अर्को सेवाको समकक्षीकै मातहत बस भन्न पनि त हुँदैन नि ।
 विवाद बढता शिक्षा सेवाकै छ रे त ?
हो त । शिक्षाको पनि उप सचिव नगर पालिकाको कार्यकारी पनि उपसचिव । यी दुुईजना एउटै अड्डामा बस्न सक्ने कि नसक्ने ? समकक्षी कार्यकारीले प्रशासन गरेर बस्ने, भुक्तानी आदेश खेलाएर बस्ने डेरा पाउने, गाडी सुविधा पाउने । शिक्षाको उपसचिव उसको कारिन्दा मात्र भएर बस्ने ? यो त कहाँ मिल्छ र?
 कसरी मिल्छ त उसो भए ?
पहिलो कुरा त स्थानीय तहबाट शिक्षाको सेवा दिने हो वा स्थानीय तह आफैले यो सेवा दिने हो प्रष्टाउनुपर्यो । स्थानीय तह आफैले दिने हो भने कर्मचारी मागे भो विज्ञापन गरेर । शिक्षा सेवाका कर्मचारी स्थानीय तहका कर्मचारी हैनन्, उनीहरुको जिम्मा राज्यले लेला । व्यवस्थापन राज्यले गर्ला । दोस्रो कुरा स्थानीय तहमा शिक्षाको सेवा दिने हो भने जसरी ७५ ठाउँमा अहिले शिक्षा कार्यालयहरु छन् त्यसैगरी ७४४ ठाउँमा यी कार्यालय विस्तार गर्नुपर्यो अलग्गै र स्वतन्त्र कार्यालयको हैसियत दिनुपर्यो । समन्वयको काममा मात्र स्थानीय तहले हस्तक्षेप गर्नुपर्यो ।
 अब के होला ?
निकास तुरुन्त निस्कनुपर्छ । सायद निस्कला पनि ।अहिले एउटा तहमा एकजना उपसचिव पठाइएको छत्यो पनि नगर पालिकामा मात्र । गाउँ पालिकामा पठाएजस्तो लाग्दैन । जसलाइ जहाँ पठाइएको छ ,उसलाई अहिलेसम्म जिशिअले गर्दै आएका सबै कामको कार्यादेश दिइएको छ । शिक्षा कार्यालयमा त्यही काम गर्न २०÷२५ जनाको जनशक्ति थियो । त्यो एउटो बबुराले नगर पालिकामा के गर्न सक्ला ?? उसका सहयोगी हो हुने, काम गर्ने गराउने संयन्त्र के हुने केही कुराको ख्याल नगरी गरिएका यस्ता निर्णयले काम नगरेपछि अर्को व्यवस्था गर्नुको विकल्पै देखिदैन । तुरुन्तै अर्को व्यवस्था भएन भने स्थानीय तहमा शिक्षकले ताला लगाउन बेर छैन ।
 किन नि ?
हेर्नुस न ,सबै शिक्षकको तलब भत्ता स्थानीय तहमा गएको छ । साउनदेखि असोजसम्म र दशैं खर्चसमेत चौमासिक रुपमा निकासा दिनुपर्छ । उनीहरुले भदौको पहिलो सातासम्म माग फाराम पेश गनुपर्छ स्थानीय तहमा । यसपाली दशै छिटो परेको छ । भदौ महिनासम्म उनीहरुको चौमासिक निकासा छाडन नसक्ने हो भने भोकै हुन्छन । भोको पेटले के गर्दैन ? यसकारण ताला लाग्न सक्छभनेको । एकजना बबुराले सबै शिक्षकको माग फाराम केलाउन सक्छ ? फेरिउसले अरु काम पनि त गर्नुपर्ला नि । अनि हालत के हुन्छ ?
 हवस्त समय दिनुभएकोमा धन्यबाद ।
केहि कुरा राख्न दिएकोमा यहालाई र सीधारेखा परिवारलाई पनि धन्यबाद
अघिल्लोआशंकामा पञ्चेश्वर, फेरि बढ्याे पानी विवाद
पछिल्लोनाममा मात्रै सीमित खोज तथा उद्धार कार्यदल, रुडुकको लगानी बालुवामा पानी